Ogaden News Agency (ONA) – Khilaaf Sookala Dhexgalay Hogaanka Kaniisadaha & Kooxda TPLF.
Khilaaf Sookala Dhexgalay Hogaanka Kaniisadaha & Kooxda TPLF.
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Addis Ababa ee xarunta Gumaysiga Itoobiya ayaa sheegaya khilaaf xoogan oo soo kala dhex galay kooxda TPLF iyo hogaamiye yaasha kaniisadaha ee Kirishtaanka ah.
Sida xogta aan kuhelayno hogaanka Kaniisadaha ayaa kasoo horjeedsaday amar uga yimid taliska wayaanaha oo ahaa in ay lashaqeeyaan dowlada isla markaana ay shacabka kadhaadhiciyaan sidii ay ula shaqayn lahaayeen xukuumada.
Hase yeeshee wadaadada Kaniisadaha ayaa iska diiday soojeedinta xukuumada wayaanaha waxayna go’aan sadeen in ay dhex dhexaad kanoqdaan kacdoonada socda ama ay shacabka lasaftaan, balse taliska wayaanaha ayaa sheegay in aysan ogolaan doonin in ay fidiyaan dacwadooda dhinaca diinta mar haday diideen in ay dowlada lashaqeeyaan.
Wadaadaha masiixiyinta ah ee loodiiday in ay fidiyaan dacwadooda ayaa maamulka Gobolka Axmaarada kacodsaday in ay ufasaxaan howlahooda dhinaca diinta ah waxaana ogolaansho buuxda siiyay maamul kusheega Gobolka Axmaarada.
Warka ayaa intaas kudaraya in taliska wayaanuhu uu is hortaag kusameeyay ogolaanshihii maamul kusheega Axmaarada, iyagoo sheegay in maamulka Gobolka Axmaaradu uusan ogolaan karin wax uu diiday taliska guud ee wayaanuhu.
Arintan ayaa lasheegayaa in ay keentay khilaaf balaadhan oo udhaxeeya maamul kusheega Gobolka Axmaarada iyo taliska wayaanaha wuxuuna khilaafku umuuqdaa mid siifidaya.
Sikastaba ha ahaatee wadaadada hogaamiya diinta kirishtaanka ayaa kuhanjabay in ay qoriga qaadi doonaan mar hadii laga hor istaagay in ay diintooda sida ay rabaan ugutaan, waxayna sheegeen in ay taageeri doonaan jabhadaha hubaysan iyo dadka kacdoonka wada.